KAPPESY ACID Phenethyl Ester (CAPE) poids (104594-70-9) ≥98% | AASraw
Eo am-panafahana kafe (PHP)
/ Products / R & D Reagents / Kaferika Acid Phenethyl Ester (CAPE)
SKU: 104594-70-9. Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny PHP (104594-70-9) kafe amin'ny PHP, eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Ny lahatsary vovoka poeta ketsa ao amin'ny PHP (CAPE)
Eo am-panafahana kafe (PHP) ireo karazana fototra
Name: Eo am-panafahana kafe (PHP)
Formula Molecular: C17H16O4
Meny fitetezana 284.31
Color: Vovony tsy fotsy
Eo am-panaovana kafe amin'ny PHENETY Ester (CAPE)
Kaomandy Phenethyl Ester (CAPE), 2-phenylethyl (2E) -3- (3,4-dihydroxyphenyl) acrylate, caffeate phenylethyl; Phenethyl caffeate; Kanseran'ny atiny 2-phenylethyl ester; β-phenylethyl caffeate;
Fampiasana vovo-dronono Phenethyl Ester
Ny fiarovana ny marary amin'ny voka-dratsin'ny fitsaboana simika sy ny radiotherapy dia nahasarika ny fahalianan'ny mpitsabo sy ny mpitsabo. Ny kôpôterina asidra Phenethyl Ester (poopy kafe), izay nalaina avy amin'ny propolis ny ravin-tantely ho toy ny singa mavitrika, manakana manokana ny fikajiana κB amin'ny mikrônera mikromolar ary mampiseho ny fahafahana hampiato ny oxygenation 5-lipoxygenase karazan'ny asidra linoleika sy ny arachidony asid. Ny vovobidy CAPE dia misy anti-inflammatory, antiproliferative, antioxidant, cytostatic, antiviral, antibacterial, antifungal ary antineoplastic properties. Ny tanjon'ity fanadihadihana ity dia ny hamintina ny vivo sy ny fampiasana ny vovobony CAPE mba hisorohana ny fahavoan'ny chimieapia-indostrialy sy ny radiotherapy ary ny fiantraikany eo amin'ny biby fanandramana sy ny fampivoarana fomba fijery vaovao amin'ny mety ho fampiasana ny vovobony CAPE ao amin'ny toeram-pitsaboana ho toy ny mpitsabo mpanampy amin'ny fitsaboana simika sy ny fitsaboana radiotherapy.
Ny vovonan'ny ketsa atao hoe Phenethyl Ester (kapôba CAPE) dia singa mavitrika amin'ny propolis, vokatra azo avy amin'ny tantely. Ny kanafin'ny saka Phenethyl Ester dia endri-pandaminana manokana momba ny fotodrafitrasa nokleary nokleary, NF-κB. Ny vovon-tany CAPE dia nampiseho fa nanamaivana tanteraka ny lipoxygenase ny metabolisma arachidonika nandritra ny fiterahana. Ny kanseran'ny Phenethyl Ester ety amin'ny kafeno dia manakana ny fidiran'ny HIV-1, ary manakana ny fampiroboroboana ny sela miovaova. Izany dia miteraka apoptose amin'ny fiovan'ny fibroblasts, ary manelingelina ny fiverimberenan'ny signal EGF izay misy fiantraikan'ny kininina C sy ornithine decarboxylase.
Endri-javatra sy ny tombontsoa
Ity fitaovana ity dia vokatra hita ho an'ny fikarohana Gene Regulation. Tsindrio eto raha hijery bebe kokoa ny Gene Regul product. Mianara bebe kokoa momba ny molekiola bitika bitika amin'ny sehatra fikarohana hafa ao amin'ny sigma.com/discover-bsm.
Io fitambarana io dia natolotra ho an'ny sehatry ny Tranombokin'ny Sigma momba ny Pharmacologically Active Compounds, fanangonana biôlôjika ahitana tahiry avo lenta sy miendrika. Tsindrio eto raha hianatra bebe kokoa.
Ny kanafin'ny saka Phenethyl Ester (vovo-dronona CAPE) dia fitambarana bioactive amin'ny extract propolis. Ny fikarohana avy amin'ny literatiora dia mamaritra fa ny poeta CAPE dia manana antibiotika, antioxidant, antilopio, ary ny toetran'ny toetrandro. Ny tanjona voalohan'ny fanadihadihana dia ny hamaritana sy hanamafisana amin'ny fomba ofisialy ny angon-drakitra efa misy momba ny vokatra ara-pahasalaman'ny vovobony CAPE amin'ny aretina isan-karazany. Ny fikarohana dia mamolavola fa ny poofa CAPE dia ny polyphenol be mpampiasa ara-pahasalamana sy ny adjuvant chimiothérapie mahomby mba hampitomboana ny herin'ny fitsaboana ary hampihena ny toeram-pitsaboana simika.
Fampitandremana momba ny vovo-dronono manerantany
GHS Hazard fanambarana
Fampahalalana momba ny GHS nateraky ny orinasa 72 avy amin'ny fampahafantarana 3 amin'ny C & L Inventory. Ny fampahafantarana tsirairay dia mety mifandray amin'ny orinasa maro.
H315 (100%): Manimba ny fahasimbana eo amin'ny hoditra [Hery an-tsela / fampahafantarana ny hoditra] H319 (100%): Manimba ny fahasimbana eo amin'ny maso [Fampitandremana ny fahavoazana eo amin'ny maso / fahasimbana ny maso] H335 (98.61%): toxicity, fanasitranana tokana; Fanitsakitsahana ny vatana mangatsiaka]
Ny fampahalalana dia mety tsy mitovy amin'ny fampahafantarana miankina amin'ny fahalotoana, ny fanampiana ary ny antony hafa. Ny lanjan'ny isan-jato eo amin'ny valopy dia manondro ny tahan'ny fanoratana anarana avy amin'ireo orinasa izay manome fehezan-dalàna momba ny loza. Ireo kôdôgrafika mitovitovy amin'ny isa ambony amin'ny 10% no aseho.
Cautionary Statement Codes
P261, P264, P271, P280, P302, P352, P304, P340 + P305, P351 + P338, P312 + P321 + P332, P313, P337, P313, P362, P403, P233, P405, P501 + PXNUMX, PXNUMX,
Azo atao ny manome soso-kevitra mba hananana hetsika isan-karazany, toy ny antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, ary cytotoxicity, ny poezia ketsa ao amin'ny Phenethyl Ester (CAPE). Ny fanadihadiana fandrosoana dia takiana amin'ny fisian'ny toeram-pitsaboana amin'ny fitrandrahana CAPE raha toa ka ampiasaina ho fitaovana fitsaboana izy io. Misy literatiora be dia be ao amin'ny faritra fikarohana, saingy mbola misy faritra kely dia kely na tsy voamarika; Noho izany, fanadihadiana fanampiny ny fampiasana ity polyphenol mahazatra sy ara-toekarena ity ho an'ny fitsaboana tsara indrindra ny aretina dia takiana sy atolotra.
Maro ny karazana famatsiam-pahaizana momba ny vitaminina sy ny fiantraikany amin'ny modely biby dia notaterina ho an'ny vovobony CAPE, saingy tsy fantatra ny dikan'ny klinika. Manana antimitogenic, anticarcinogenic, anti-inflammatory, ary immunomodulatory properties ao vitro. Ny fandinihana iray hafa dia naneho koa fa ny poeta CAPE dia manakana ireo valim-panafody miaro amin'ny immunité sy inflammatoire amin'ny vitro. Io fiantraikany amin'ny homamiadana io koa dia hita rehefa voan'ny virosin'ny hodimaso ny hoditra ary voan'ny TPA, akora simika izay nanindrona papillomas hoditra. Ny habetsahan'ny papillomas dia mampihena ny habetsahan'ny papilloma.
Rehefa dinihina ireo literatiora teo aloha, dia azo soloana ny hodi-doko CAPE ny fisian'ny hetsika isan-karazany, toy ny antibiotika, antioxidant, fihetsika manohitra ny atidoha sy ny cytotoxicity. Ny fanadihadiana fandrosoana dia takiana amin'ny fisian'ny toeram-pitsaboana amin'ny fitrandrahana CAPE raha toa ka ampiasaina ho fitaovana fitsaboana izy io. Misy literatiora be dia be ao amin'ny faritra fikarohana, saingy mbola misy faritra kely dia kely na tsy voamarika; Noho izany, fanadihadiana fanampiny ny fampiasana ity polyphenol mahazatra sy ara-toekarena ity ho an'ny fitsaboana tsara indrindra ny aretina dia takiana sy atolotra.
Eo am-panafahana kesika atao hoe Phenethyl Ester
Eo am-panaovana ketsa Phenethyl Ester Marketing
Ahoana no hividianana vovo-dronono Phenethyl Ester; Mividiana entona CAPE avy AASraw
Fanasan-kena ao Phenethyl Ester Recipes: